Cloud Computing: လက်ရှိ Open Source Applications များနှင့် Platform များ | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 24/09/2021 06:00 | NOTICIAS, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ
အခါအားလျော်စွာကျွန်ုပ်တို့သည်အတိမ်အနက်ကိုစူးစမ်းလေ့ရှိသည် အိုင်တီဒိုမိန်း ရှုထောင့်မှအာရုံစိုက်သည် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၊ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် GNU / Linuxမရ။ နောက်ဆုံးအကြိမ်သည်မကြာသေးမီကဖြစ်သည် အတုထောက်လှမ်းရေး Artificial Intelligence: လူသိများပြီးလူသိများတဲ့ open source AI ကိုခေါ်တဲ့စာစောင်တစ်ခုမှာ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် IT နယ်ပယ်နှင့်ဆင်တူသောအရာတစ်ခုကိုလုပ်လိမ့်မည် "Cloud တွက်ချက်ခြင်း"၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ Cloud computing.
၎င်းကိုသတိပြုပါ "Cloud Computing" သို့မဟုတ် Cloud computing အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည် အင်တာနက်မှတဆင့် virtualized IT အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းမရ။ ၎င်းကို ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်ပြီးသန့်ရှင်းသောတွက်ချက်မှုမှတဆင့်ဖြန့်ဝေသည် Cloud ၀ န်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်း.
Cloud Computing: အရာအားလုံးကိုဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် XaaS
ကျွန်ုပ်တို့၏အချို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်စိတ် ၀ င်စားသူများအတွက် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ ၏အတိုင်းအတာနှင့် Cloud တွက်ချက်ခြင်းဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးရင်အောက်ပါလင့်ခ်တွေကိုသင်ကလစ်နိုင်ပါတယ်။
"XaaS သည်လက်ရှိတွင် cloud computing ဈေးကွက်အတွက်ပါရာဒိုင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းသည်ဆက်သွယ်ရေး၊ Big Data နှင့် Internet of Things (IoT) ကဏ္onများအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ XaaS သည် cloud ၌နည်းပညာဆန်းသစ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအယူအဆများစွာပါ ၀ င်သောနည်းပညာအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်အများပိုင်နှင့်အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးအတွက်၊ အဖွဲ့အစည်းများကိုဖန်တီးရန်နှင့်တန်ဖိုးမြှင့်ရန်နည်းလမ်းသစ်များကိုဖန်တီးပေးသည်။". XaaS: Cloud Computing - ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်
XaaS: Cloud Computing - ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်
Cloud မှတဆင့်အပြန်အလှန်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း: ဘယ်လိုအောင်မြင်ရမလဲ။
OpenStack နှင့် Cloud Computing: အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ဖြင့် Cloud Computing ၏အနာဂတ်
Ethernity CLOUD: Open Source Cloud Computing Network ဖြစ်သည်
1 Cloud Computing: ထိပ်တန်း open source ပလက်ဖောင်းများနှင့်အက်ပ်များ
1.1 Cloud Computing ပလက်ဖောင်းများ
1.1.2 တိမ်တိုက် Foundry
1.2 Cloud Computing Apps များ
Cloud Computing: ထိပ်တန်း open source ပလက်ဖောင်းများနှင့်အက်ပ်များ
Cloud Computing ပလက်ဖောင်းများ
အဆိုပါအကြား "Cloud Computing" ပလက်ဖောင်းများ o Cloud computing, အ open source ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အောက်ပါ ၄ ချက်ကိုဖော်ပြပြီးဖော်ပြနိုင်သည်။
၎င်းသည်ဒေတာစင်တာတစ်ခုလုံးရှိတွက်ချက်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ကွန်ယက်အရင်းအမြစ်များကိုထိန်းချုပ်သော cloud ရှိ Operating System တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့အားလုံးကိုဘုံအထောက်အထားစိစစ်ခြင်းယန္တရားများဖြင့် API များမှတဆင့်စီမံကွပ်ကဲသည်။ ၎င်းတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအား ၀ က်ဘ် interface မှတဆင့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူများအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စေသောထိန်းချုပ်နိုင်သော panel တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေနှင့်အခြေခံအဆောက်အ ဦ များ၏စံလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအပြင်၊ သုံးစွဲသူများ၏အသုံးချနိုင်မှုမြင့်မားစေရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှု၊ တေးဂီတစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ပါ ၀ င်သောအပိုဆောင်းအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်။ OpenStack ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်းသည် Kubernetes တွင် cloud-native applications များပေးပို့ရန်အလွန်ထိရောက်။ ခေတ်မီသောပုံစံကိုပံ့ပိုးပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေနှင့်ဖွင့်ထားသောပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် cloud၊ developer ဘောင်များနှင့် application ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်ပေးသည်။ မင်းအတွက်ပိုမြန်ပြီးပိုလွယ်အောင်အပလီကေးရှင်းတွေကိုတည်ဆောက်၊ စမ်းသပ်၊ ဖြန့်ချ၊ Cloud Foundry ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်းသည်အဆုံးမှအစသို့အလိုအလျောက်လည်ပတ်နိုင်သောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော Kubernetes ကွန်တိန်နာပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည် hybrid cloud, multicloud နှင့် edge computing deployments များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီပေးသည်။ Red Hat လုပ်ငန်းမှဤဖြေရှင်းချက်သည် developer များ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေရန်နှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဆုံးမှအဆုံးအလိုအလျောက်လည်ပတ်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက်တသမတ်တည်းအတွေ့အကြုံနှင့် developer များအတွက်ကိုယ်တိုင် ၀ န်ဆောင်မှုဖြန့်ကျက်မှုတို့ဖြင့်အဖွဲ့များသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှစိတ်ကူးများကိုပိုမိုအကျိုးရှိစွာရွေ့ပြောင်းနိုင်ရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Red Hat OpenShift ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်းသည် open source multi-cloud နှင့် edge orchestration ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ အခြားအရာများအနေနှင့်၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်းများကို public cloud နှင့် cloud-native architecture များသို့လွယ်ကူစွာကူးပြောင်းခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏လက်ရှိအခြေခံအဆောက်အ ဦ များကိုဖြန့်ဝေထားသော edge နှင့် cloud-native ရင်းမြစ်များနှင့်အတူအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအား CI / CD ပိုက်လိုင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအလိုအလျောက်နှင့်သံစုံတီးဝိုင်းဒိုမိန်းများအားစီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီနိုင်သည်။ Cloudify ဆိုတာဘာလဲ။
အခြား ၁၃ ရှိပြီးသားနှင့်လူသိများသည် သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
Cloud Computing Apps များ
အဆိုပါအကြား applications များ နှင့်သက်ဆိုင်သည် (သို့) သက်ဆိုင်သည် အိုင်တီဒိုမိန်း del "Cloud တွက်ချက်ခြင်း" o Cloud computing, အ open source ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အောက်ပါ ၁၀ ချက်ကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
အဲဒါကိုသတိရပါ ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အချက်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်သည် သဘောတရားများနှင့်နည်းပညာများ အောက်ပါ:
အရာအားလုံးကို ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ XaaS၊ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေနှင့်၊ အရာအားလုံးကို ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေနှင့်
၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်ဆော့ဝဲ SaaS၊ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်ဆော့ဝဲ
ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ပလက်ဖောင်း PaaS၊ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကဲ့သို့ပလက်ဖောင်း
၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အခြေခံအဆောက်အ ဦး IaaS၊ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အခြေခံအဆောက်အ ဦး
အားသာချက်များ၊ အားသာချက်များ၊ အားနည်းချက်နှင့်အန္တရာယ်များ: Cloud Computing မှ
အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ: တိမ်တိုက်မှတဆင့်
Cloud အမျိုးအစားများလူထု၊ ပုဂ္ဂလိက၊ လူထုနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။
အနာဂတ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောပလက်ဖောင်းများ: cloud computing
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်၊ "Cloud တွက်ချက်ခြင်း" အများအပြားထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် လက်ရှိ IT လမ်းကြောင်းများ နေ့စဉ်နှင့်အမျှတိုးတက်လာသည်နှင့်၎င်းသည်အထူးသဖြင့်အလုပ်နှင့်လူနေမှုဘ ၀ အတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အရေးပါသောအောင်မြင်မှုများကိုရုပ်လုံးပေါ်စေမည်ဟုကတိပြုသည်။ ဟိ Cloud computing အစရှိသောတိုးတက်ပြည့်စုံသောနည်းပညာများနှင့်အတူ 6G, အ Artificial Intelligence (အိုင်အက်စ်)အဆိုပါ အရာများအင်တာနက် (IoT) နှင့်အခြားများစွာ၊ ကတိတစ်ခုပေးပါ အနာဂတ်အိုင်တီ လူသားတွေအတွက်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » Cloud Computing: လက်ရှိ Open Source Applications များနှင့် Platform များ
Epic Games ၏ Easy Anti-Cheat ၀ န်ဆောင်မှုသည်ယခုအခါ Linux နှင့် Mac တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်